Nanakana Ny Zello Fampiasa Talkie-Walkie I Rosia Rehefa Nitokona Ny Mpamily Kamiao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Avrily 2017 5:00 GMT
Sary: YouTube. Mpamily kamiao Rosiana iray manao hetsi-panoherana manohitra ny fampidirana ny hetra vaovaon'ny làlana .
Namoaka fanambarana ampahibemaso momba ny hetsika ny Roskomnadzor, manampahefana tompon’ andraikitra amin'ny fanaraha-maso sy ny fanasivanana ny fampitam-baovao Rosiana izay niampangany ny mpamorona ny fampiasa tsy miafina walkie-talkie ho tsy nandefa ny fanazavana ilaina amin'ny orinasa hampidirana azy anatin'ny lisitra federaly araka ny fe-potoana nomena. Nilaza ny Roskomnadzor fa nangatahana ny Zello hanome ny fanazavana mifototra amin'ny fangatahana avy amin'ny “andrim-panjakana mpanatanteraka federaly” izay tondroin'ny vohikalam-baovao TJournal ho ny Sampam-piarovana Federaly (FSB).
Taorian'ny fampidirana ny lalàna nolaniana tamin'ny taona 2014 mba hiadiana amin'ny fampihorohoroana dia namorona “ny rejisitry ny Mpikarakara Fampielezam-baovao” ny governemanta Rosiana, lisitry ny sehatra an-tserasera hanaovan'ny Roskomnadzor fanaraha-maso izy io. Afaka tsy miditra ho ao anatin'io lisitra io ny orinasa raha toa ka manome ny governemanta Rosiana ny fidirana tsy voafetra amin'ny fandefasana ny angona mivantana. Koa satria tsy nandefa ny taratasy ilaina tany amin'ny Roskomnadzor ny Zello, dia hita fa tsy ho tafiditra anatin'ny lisitra izy izay manana mpisera mihoatra ny 400.000 ao Rosia, ary dia nosakanana.
Fampitandremana navoakan'ny Fiombonan'ny Mpamily Kamiao ao Rosia manoro hevitra ny mpiseran'ny fantsona Zello mba hampiasa VPN.
Tamin'ny 8 Aprily, nanambara tao amin'ny Twitter ny Zello fa nahazo hafatra avy amin'ny Roskomnadzor izy tamin'ny 6 Aprily milaza fa tsy nampandre ny manampahefana Rosiana momba ny fanombohan'ny asany tao amin'ny firenena izy. Nilaza tamin'ny Zello ny Roskomnadzor fa mety ho voasakana izy amin'ity herinandro ity raha toa ka tsy manome ny fanazavana nangatahana taminy . Nitatitra ny filazam-baovao mivoaka isan'andro RBK taty aoriana fa efa nomen'ny manampahefana toro-làlana ireo mpamatsy tolotra aterineto mba hanakana ny fidiran'ny Zello amin'ny finday.
Nahazo filazana avy amin'ny Roskomnadzor izahay fa ho voasakana ao Rosia ny Zello amin'ny herinandro….
Nanoratra tao amin'ny bilaogin-dahatsoratra nivoaka tamin'ny zoma i Alexey Gavrilov, Rosiana mpanorina sady Talen'ny Teknolojia ao amin'ny Zello, izay monina any Etazonia (ao Austin, Texas), fa tsy hamaly ny fangatahan'ny Roskomnadzor ny orinasany. Nilaza izy fa araraotina hanakanana ireo tolotra amin'ny aterineto “manohintohina” ny lalànan'ny “Mpikarakara ny Fampielezam-baovao ” .
Ny fitakian'ny lalàna, hoy izy “dia tsy vitan'ny hoe tsy mitombina fotsiny ihany avy amin'ny fomba fijery ara-teknika, fa manohitra ihany koa ny fitsipikay ka noho izany dia tsy hanatanteraka izany izahay.”
Ny Fifandraisana sy ny Hetsi-panoherana: Ahoana no hihazonana ny tsiambaratelon'ny resakareo
Lasa malaza teo amin'ny mpikatroka manerantany tamin'ny taona 2014 ny Zello, ary izany ihany koa no mahatonga azy ho lasibatry ny governemanta : nanakatona ny Zello tamin'ny taona 2014 ny governemanta Venezoeliana , rehefa nanomboka nampiasa azy io ireo mpikatroka mba hanaovana hetsi-panoherana manohitra ny politika ara-toekarenan'ny Filoha Nicolas Maduro. Tamin'ny taona 2014, mpikatroka Bahrainita miisa 15 no nosamborina ary nanjavona rehefa nampiasa ny Zello ny manampahefana mba hamitahana azy ireo tamin'ny fivoriana sandoka. Nahatonga ahiahy momba ny harefon'ny fampiasa amin'ny fijirihana sy ny fitsabahan'ny governemanta izany.
Nilaza ny manam-pahaizana momba ny fiarovana ara-teknika fa mila mampiasa fampiasa toy ny Signal na Wire ireo mpanao fihetsiketsehana izay mikasa hiresaka sy hikarakara hetsika manokana , samy manana fanafenantsoratra hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany ireo roa ireo ary “manjavona ” ny hafatr'ireo mpisera aoriana kelin'ny famakian'izy ireo izany.
Malaza eo amin'ny mpamily kamiao manao dia lavitra ao Rosia ny Zello, izay mamela ireo mpisera mba hifandray amin'ny alalan'ny fantsona manokana (fa tsy voafina tanteraka), ary efa nanao fitokonana nandritra ny telo herinandro ho fanoherana ny hetran'ny làlana izay hampitombo 25 isanjato ny hetra aloan'izy ireo.
Nilaza ny mpitarika ny hetsi-panoherana fa hahatonga ireo mpamily kamiao hihemotra amin'ny raharaham-barony ny rafitry ny hetra vaovao. Nilaza i Andrei Bazhutin, filohan'ny Fiombonan'ny Mpamily Kamiao ao Rosia (OPR, fikambanana ara-barotra iray) sady mpikarakara ny fitokonana fa mety ho very asa vokatry ny hetra ny mpamily kamiao Rosiana marobe eo amin'ny 700.000 eo .
Nanao hetsi-panoherana manohitra ny fampidirana ny rafitry ny lalanan'ny hetra “Platon” ireo mpamily kamiao, izay nolazain‘izy ireo fa hampanan-karena ny manampahefana fotsiny fa tsy hanome fanatsarana ny lalam-pirenena, rehefa nekena ny hetra nanomboka tamin'ny taona 2015 ; ho setrin'izany, nahemotry ny manampahefana hatramin'ity volana ity ny fampidirana ny hetra .
Nilaza ny mpikarakara fa miandry mpamily kamiao mihoatra ny 10.000 handray anjara amin'ny fitokonana amin'izao fotoana izao izy ireo, izay atao manerana ny faritra miisa 80 amin'ny 83 ao Rosia (85, raha isaina i Crimea izay nalaina tamin'ny fomba tsy ara-dalàna sy i Sevastopol). Nampiasa ny fantsona Zello antsoina hoe OPR ny mpamily kamiao mba handaminana ny ezaka ataon'izy ireo. Misy rohy mankany amin'ny fantsona eo ambonin'ny tranonkala OPR, izay manoro hevitra ireo mpisera mba hampiasa ny VPN noho ny fanapahan-kevitry ny Roskomnadzor hanakana ny fampiasa.